Yimiphi imisebenzi nezinzuzo zamatheminali e-kiosk? -Izindaba-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Yimiphi imisebenzi nezinzuzo zamatheminali e-kiosk?
ISIKHATHI: 2020-10-06 HITS: 18
Ngokuhamba kwesikhathi, ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe, okufunwa ngabantu kuyashintsha njalo. Ngokombono wokuhlangenwe nakho, insizakalo esezingeni eliphakeme isho ubungani. ama-kiosk terminals ancike ezinzuzweni zobuchwepheshe kanye nokuqondwa kwezidingo zamakhasimende ukuhlinzeka amakhasimende ngecebo lesipiliyoni esikahle sokungeza ama-kiosk terminals. Okulandelayo umsebenzi wekhiyoski nezinzuzo ezifushaniswe ngu Ungbo Joiwo Explosionproof ngoba reference yakho.
Yini imisebenzi yamatheminali esitodlwana?
Izikhumulo ze-1.kiosk zisetshenziswa kakhulu ukunciphisa inkinga yezixuku ezinkulu emahholo amabhizinisi nokwandisa isivinini sokucutshungulwa kwebhizinisi. Zisetshenziswa kakhulu emabhange, ezokuxhumana ngocingo, amandla kagesi, ezokwelapha, ezokundiza, ezokuthengisa nakwezinye izimboni.
2. Izakhiwo zetiyoski zisekelwe kumqondo wokuklanywa kohlelo we "24-hour self-service", enganciphisa inkinga yokugcwala ngokweqile emahholo ebhizinisi lendabuko, enzele ukushiyeka kwamahora okuqala ebhizinisi, gwema izinkinga ze amakhasimende aphatha ibhizinisi ehholo lebhizinisi, futhi enza amakhasimende azizwe elula, elula futhi ecabangela inkonzo. Izindawo ezikitiyela zehholo lebhizinisi ziyisengezo nesengezo senkonzo yehholo lebhizinisi.
3. Abasebenzisi embonini yezezimali bangenza imibuzo ye-akhawunti, ukudluliswa kwezinsizakalo, ukuphrinta izitatimende, ukuthumela kabusha, kanye nezinsizakalo zokubika ukulahleka kokuzenzela; abasebenzisi embonini yezokuxhumana bangenza ukuzicisha (ukutakula kabusha) kanye nemibuzo yebhili yocingo ngokufaka izinombolo zabo zocingo ngokusebenzisa i-terminal Ukuphrinta, ukukhokha, ukuphrinta i-invoyisi, i-ID yocingo, i-GPRS nezinye izinsizakalo eziyisisekelo ziyavulwa futhi zivaliwe; futhi ungathenga amakhadi weselula namarisidi wokugcwalisa kabusha iphasiwedi.
4. Ukuthuthukiswa kwenani elengeziwe, nezinye izinsizakalo ezengeza inani njengokuthengwa kwempahla nakho kungatholakala ngemishini esekelayo. Imishini inezinzuzo zokonga izindleko zabasebenzi, ukunciphisa izindleko zokusebenza, ukusebenza okuqhubekayo amahora angama-24, nokusebenza okungenamaphutha. Ingabekwa ezindaweni zomphakathi njengamahholo amabhizinisi ezokuxhumana ngocingo, izindawo zokuqoqelwa kwamaholo, iziteshi, izikhungo, izikhumulo zezindiza, izinxanxathela zezitolo ezinkulu, njll.
Yiziphi izinzuzo zamatheminali esitodlwana?
1. Ukuheha amakhasimende amaningi: Umsebenzi wokuzenzela amathenda we-self-service awugcini nje ngokuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi wamakhasimende, kodwa futhi ungaheha amakhasimende amaningi ukuthi awadle.
2. Ukwanelisa izidingo zamakhasimende: Inzuzo yekhiyoski ukuthi amakhasimende ayazidinga. Abathengi bathanda inqubo yokukhokha esebenza kahle yokuzihlola, futhi iningi labantu lifuna ukuzisebenzela ngokwengeziwe. Hlangana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ngokuzisebenzisela ukuzenzela izinsiza zokuzenzela.
3. Nciphisa isikhathi sokulinda kwamakhasimende: Ukulinda kulayini kuyinto engeyinhle kumakhasimende ezitolo ezidayisa ezitolo. Ngemuva kokulinda isikhathi eside, amakhasimende ngeke aneliseke ngokwengeziwe. Ngama-terminos terminals, amakhasimende angasuka ekunganeliseki aye ekwanelisekeni.
4. Nciphisa izindleko ezingaqondile: Inzuzo yamatheminali e-kiosk ukuzisebenzisela amanye amabhizinisi amancane ukuthi uma uhlinzeka ngokuzihlola, awudingi abaphathi abaningi. Imvamisa udinga umuntu wokuqapha ukuphela kwe-self-service futhi asize ekuxazululeni izinkinga zomshini noma imibuzo yamakhasimende. Kodwa-ke, udinga umsebenzi oyedwa kuphela ukuphatha imishini emine noma eyisithupha. Ungasebenzisa imali oyongayo ukutshala kwezinye izinsizakalo noma amaphrojekthi wokuthuthukisa amabhizinisi.
Lokhu okungenhla kuyimisebenzi nezinzuzo zamatheminali esitokofela owethulwe kuwe nguNingbo Joiwo Explosionproof. Ungbo Joiwo Explosionproof uneminyaka eminingi unikeza isisombululo se-telecom. Sisebenza ngokukhethekile ucingo lwethiyoski, ucingo lwe-Explosionproof / Weatherproof, ucingo olonakalisayo, i-intercom, ifoni yomphakathi, ifoni yasejele, njll.Ifoni yethu yensimbi engenasici ingafakwa emshinini we-kiosk nge-flush egibele.
Uma ufuna ukwazi imininingwane engaphezulu yekhiyoski, sicela uze kusayithi lethu ukuvakashela nokushintshana.
Yiziphi izinyathelo zokuphepha zokusebenzisa i-intercom?